Eebbe waa , Kaniisadda Adduunka ee God Switzerland (WKG)
Halkuu Kitaabka Quduuska ahi sheegayaa “Ilaah”, micnaheedu maahan inuu qof keli ahi yahay dareenka "nin oday ah oo leh gadh cawlan iyo koofiyad" oo loo yaqaan Ilaah. Baybalku wuxuu aqoonsan yahay Eebbe ina abuuray isagoo ah isku xirnaan seddex qof oo kaladuwan ama "kala duwan", oo ah Aabbaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah. Aabuhu ma aha wiilka, wiilkuna ma aha aabbaha. Ruuxa Quduuska ahi ma aha aabbaha ama wiilka. In kasta oo ay leeyihiin shaqsiyad kaladuwan, waxay leeyihiin isku ujeeddo, damac iyo isku jacayl, waxayna leeyihiin isku muuqaal iyo isku mid (Bilowgii 1:1; Matayos 26:28, Luukos 19: 3,21-22).
Saddexda qof ee Ilaah waa kuwo aad isugu dhow oo aad isu yaqaan oo haddii aan naqaanno hal qof oo Ilaah ah, waxaan sidoo kale ognahay dadka kale. Taasi waa sababta Ciise muujiyey inuu Ilaah yahay mid waana inaan maskaxda ku hayno taas markaan nidhaahno waxaa jira Ilaah keliya (Mark 12,29). Ka fikirida in saddexda qof ee Ilaah ay yihiin wax ka yar hal waa inay khiyaaneeyaan midnimada iyo wada noolaanshaha Ilaah! Ilaah waa jacayl taasna waxay ka dhigan tahay in Ilaah yahay mid leh xiriir dhaw (1 Yooxanaa 4,16). Sababtaan awgeed, oo ku saabsan Ilaah, Ilaah mararka qaarkood waxaa loogu yeedhaa "Saddexanka" ama "Ilaaha Qaadirka ah". Saddexmidnimada iyo saddexnimadu labaduba waxay ka dhigan yihiin "saddex midnimo". Markaan nidhaahno "Ilaah" waxaan had iyo jeer ka hadleynaa seddex qof oo kaladuwan oo midnimada ah - Aabaha, Wiilka iyo Ruuxa Quduuska ah (Matayos 3,16: 17-28,19;). Waxay la mid tahay sida aan u fahamno ereyada "qoyska" iyo "koox". «Koox» ama «qoys» leh dad kala duwan, laakiin dad u dhigma. Tan macnaheedu maahan inay jiraan ilaahyo saddex ah maxaa yeelay Ilaah waa hal Ilaah oo keliya, laakiin saddex qof oo kaladuwan ayaa ka mid ah kuwa Ilaah (1 Korintos 12,4: 6-2; 13 Korintos 14).
Ilaaha Qaadirka ah wuxuu ku raaxeysanayaa xiriir wanaagsan oo kan ka dhexeeya inuu yeesho go'aan ah inuusan xiriirkaas sii wadin. Aad bay ugu fiicantahay taas! Saddexmidnimada Ilaah wuxuu rabay inuu ku daro kuwa kale xiriirkiisa jacaylka si kuwa kale ay nolosha ugu raaxeystaan ​​nolosha weligeed ah hadiyad ahaan. Saddexmidnimada Ilaah ujeeddadiisu ahayd inuu la wadaago noloshiisa farxadda leh dadka kale waxay ahayd sabab uunka oo dhan, gaar ahaan abuuritaanka aadanaha (Sabuurradii 8, Cibraaniyada 2,5: 8!). Taasi waa macnaha Axdiga Cusubi
ereyada «korsashada» ama «korsashada» (Galatiya 4,4-7; Efesos 1,3-6; Rooma 8,15-17.23). Saddexmidnimada Eebbe wuxuu ku talojiray inuu ku daro dhammaan wax kasta oo abuur ah oo nolosha Ilaah ah! Ilmo korsashada ayaa ah sababta ugu horeysa ee Eebbe ee waxkastoo la abuuray Bal qiyaas malaga aqbalo warka wanaagsan ee Ilaah sida qorshaha "A", meesha "A" ay u taagan tahay "korsasho"!
Maxaa yeelay Ilaah, Saddexanka, wuxuu jiray ka hor intaanu jirin waxa aan ugu yeedhno abuurka, marka hore waxay ahayd inuu abuur u keeno jiritaanka si loo korsado .. Laakiin su’aasha ayaa timid: sidee abuurka iyo aadanuhu ula xiriiri karaan xiriirka saddex-geesoodka Eebbe Ma lagu dari karaa haddii saddex-geesood Eebbe laftiisa uusan ku abuurin xiriirkan? Ka dib oo dhan, haddii aadan Ilaah ahayn, adigu ma noqon kartid Ilaah sinaba haba yaraatee! Wax la abuuray MA noqon karaan wax aan la abuurin. Qaab uun, Saddexanka Ilaah waa inuu noqdo abuur oo uu sii ahaado abuur (Intii ay ilaalinayso Ilaah isla waqtigaas) hadii Eebbe doonayo inuu si rasmi ah noogu keeno xiriirkiisa guud oo uu halkaas na sii hayo. Tani waa meeshii abuurista Ciise, oo ah ninka Ilaah, uu ka ciyaaro ciyaarta. Ilaah, Wiilku wuxuu noqday bini-aadam - tani macnaheedu waa inaysan ahayn haba yaraatee sababtuna tahay dadaalkeenna gaarka ah ee ah inaan isu keenno cilaaqaad lala yeesho Ilaah. Ilaaha saddexan, ee nimcadiisa, ayaa ku daray dhammaan abuurista Ciise, Wiilka Ilaah, xidhiidhkiisa. Sida kaliya ee abuurka loogu abuuri karo xiriirka saddex geesoodka ah ee Ilaah wuxuu ahaa in Eebbe is-hoosaysiiyo ciise isla markaana uu aqbalo abuuritaanka ikhtiyaar ikhtiyaar ah iyo ula kac ah. Ficilkan saddex-geesoodka ah ee Eebbe ee ah inuu si xor ah noolagu biiro xiriirkooda xagga Ciise waxaa lagu magacaabaa "nimco" (Efesos 1,2: 2,4; 7: 2-3,18; Butros).
Saddex-meelood ee qorshaha Ilaah ee ah inuu bini-aadam noqdo oo la korsado wuxuu ula jeeday inuu Ciise noo imaan lahaa xitaa haddaan waligeen dembaabin! Saddexmidnimada Eebbe ayaa inoo abuuray inuu ina korsado! Eebbe uma uusan abuurin inuu inaga xoreeyo dembiga, in kastoo Ilaah inaga badbaadiyey dembiga IN AY camalka qabtid. Ciise Masiix qorshaha ma ahan «B» ama wixii ka dambeeya ee Ilaah. Kaliya ma ahan malaas loo adeegsaday daboolista dhibaatadeena dembiga. Runta naxdinta leh ayaa ah in Ciise uu ahaa kii u horreeyay ee Eebbe ee fikirkiisa ah inuu innaga keeno xiriir aan la lahaano Ilaah. Ciise waa oofintii qorshaha "A", oo la bilaabay ka hor intaan dunida la abuurin (Efesos 1,5: 6-13,8; Muujintii). Ciise wuxuu u yimid inuu nagu lug yeelo xiriirka Saddexmidnimada Eebbe, sidii Eebbe u qorsheeyay bilowgii, iyo wax aan xitaa dembiyadeenna ka hor joogsan karin qorshahan! Dhammaanteen waannu ku badbaadnay Ciise (1 Timoteyos 4,9: 10) maxaa yeelay Ilaah wuxuu ka walwalay inuu fuliyo qorshihiisa korsashada! Saddexmidnimada Eebbe ayaa dejiyey qorshahan korsashada Ciise ka hor intaanan la abuurin, oo innaguna waxaynu nahay carruurtii Ilaahay korsaday hadda! (Galatiya 4,4-7; Efesos 1,3-6; Rooma 8,15-17.23)!
Qorshahan Saddex-geesoodka ah ee Ilaah ku abuuray abuurista dhammaan abuurista cilaaqaadkiisa xagga Ciise wuxuu ahaa mar qarsoodi ah oo aan cidina ogayn (Kolosay 1,24: 29). Si kastaba ha noqotee, ka dib markuu Ciise u kacay jannada, wuxuu u soo diray Ruuxa Quduuska ah ee runta ah si uu u muujiyo ku daritaanka iyo ka mid noqoshada nolosha Ilaah (Yooxanaa 16: 5-15). Tayada Ruuxa Quduuska ah, oo haatan lagu daadshay binu-aadmiga oo dhan (Falimaha 2,17) iyo kuwa rumaysta ee rumaysta oo salaamaya runta (Efesos 1,11: 14), qarsoodigan waxaa caan looga dhigay adduunka oo dhan (Kolosay 1,3-6)! Haddii runtaan loo xafido si qarsoodi ah, ma aqbali karno oo xorriyaddeena umaheleyno Taabadalkeed, waxaan aaminsanahay beenta waxaanna la kulanaa dhammaan noocyada dhibaatooyinka cilaaqaadka xun (Rooma 3, 9-20, Rooma 5,12: 19!). Kaliya markaan baranno runta nafteena ee ku jirta Ciise waxaan bilaabi doonnaa inaan ogaano sida ay dambi u ahayd inaan aragno Ciise si khaldan oo ku xirnaantiisa midowga adduunka iyo dadka adduunka oo dhan. (Yooxanaa 14,20:1; 5,14 Korintos 16: 4,6; Efesos!). Ilaah wuxuu rabaa in qof walba ogaado inuu yahay kan run ahaantiisa iyo kan aan ku jirno isaga (1 Timoteyos 2,1: 8)!
Tani waa warka wanaagsan ee nimcadiisa ku jirta Ciise (Falimaha 20, 24).
Marka la eego fiqigaan, oo udub dhexaadka u ah qofka Ciise, maahan shaqadeena inaan "badbaadinno" dadka. Waxaan rabnaa inaan ka caawinno iyaga inay gartaan cidda Ciise yahay iyo cidda ay ku jiraan isaga - carruurta Ilaah korsaday! Asal ahaan, waxaan rabnaa inaad ogaato inaad adigu horay u tahay Ilaah xagga Ciise (taasina waxay ku dhiiri galin doontaa iyaga inay rumaystaan ​​inay si sax ah u dhaqmayaan oo ay badbaadaan!)